တပ်ချုပ်အား ချင်းသူရဲကောင်းဘွဲ့ပေးအပ်မှု ဇိုမီးချင်းအရပ်ဖက်အဖွဲ့ ၂၂ ခု ကန့်ကွက် | Mizzima Myanmar News and Insight
တပ်ချုပ်အား ချင်းသူရဲကောင်းဘွဲ့ပေးအပ်မှု ဇိုမီးချင်းအရပ်ဖက်အဖွဲ့ ၂၂ ခု ကန့်ကွက်
ရန်ကုန်၊ ဒီဇင်ဘာ ၆ ။ ။ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကို ချင်းပြည်နယ်တီးတိန် (ဇိုမီး) အဖွဲ့မှ ချင်းသူရဲကောင်းဘွဲ့(Gal Hang Pah Tawi Na Award) ချီးမြှင့်ခဲ့မှုအား ဇိုမီးချင်းအရပ်ဖက်အဖွဲ့ ၂၂ ခုက ကန့်ကွက်လိုက်သည်။
တီးတိန် (ဇိုမီး) အဖွဲ့နှင့် ကလေးကက်သလစ် သာသနာမှ ဘုန်းတော်ကြီးများ၊ ရန်ကုန်မြို့နယ် သိက္ခာတော်ရ ဆရာတော်ကြီးပါဝင်သည့် အဖွဲ့တစ်ခုက နေပြည်တော် ဘုရင့်နောင် ရိပ်သာဧည့်ခန်းမတွင် တပ်ချူပ်အား သွားရောက်တွေ့ဆုံပြီး ချင်းသူရဲကောင်းဘွဲ့ကို ဒီဇင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့က ချီးမြှင့်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ထိုဆု ချီးမြှင့်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဇိုမီး/ချင်းလူမျိုးများနှင့် အခြားတိုင်းရင်းသား ပြည်သူများအကြားတွင် အလွန်အံ့သြပြီး စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ခဲ့ရသည်ဟု ထို အရပ်ဖက်အဖွဲ့ ၂၂ ခု၏ ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ယင်းအပြင် ဆုချီးမြှင့်မှုသည် ဇိုမီး/ချင်းလူမျိုးများ၊ သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဆရာတော်ကြီးများ၊ ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ လူမျိုးစုခေါင်းဆောင်များ၊ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများမှ သိရှိသဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ ကိုယ်စားစေလွှတ်ခြင်းများ လုံးဝ မရှိခဲ့ဟုလည်း ၎င်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ရေးသားပါရှိသည်။
"စစ်မှန်သော ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေတစ်ပြည်ထောင်စု ထူထောင်နိုင်ရန် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို အဘက်ဘက်မှ ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းတည်ဆောက်နေကြချိန်တွင် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနှင့် တပ်မတော်အကြား ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများ ဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီး စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူလူထုများသည် ကြမ်းတမ်းအေးစက်လှသော တောတောင်ထဲတွင် ပင်ပန်းဆင်းရဲစွာ ဒုက္ခကြုံတွေ့နေရသည့်အချိန်ကာလဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် နိုင်ငံတဝန်းလုံးတွင် လယ်ယာမြေသိမ်းဆည်းခံ တောင်သူလယ်သမားများ တရားစွဲထောင်ချခံနေရပြီး မြေလွတ်၊ မြေလပ်၊ မြေရိုင်း စီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေနှင့် အခြားမြေယာဥပဒေများကြောင့် တိုင်းရင်းသားပြည်သူများ၏ ဘိုးဘွားပိုင်မြေယာများ လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးနိုင်သည့် အခြေအနေများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် တီးတိန် (ဇိုမီး) အဖွဲ့ အမည်ခံ လူတစ်စု၏ ချင်းသူရဲကောင်းဆု ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်သည့် လုပ်ရပ်သည် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး၊ အမျိုးသားပြန်လည် ရင်ကြားစေ့ရေး၊ တိုင်းရင်းသား အချင်းချင်း ချစ်ကြည်စည်းလုံးရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်ဟု ရှုမြင်သည့်အပြင် မိမိတို့ ဇိုမီး/ချင်း အမျိုးသားထုနှင့် လုံးဝ (လုံးဝ) မသက်ဆိုင်ပါကြောင်း" ဟု ၎င်း ထုတ်ပြန်ချက်က ဆိုသည်။
ဒီဇင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့က တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင်မူ "တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်အား ချင်းသူရဲကောင်းဘွဲ့ ပေးအပ်ရခြင်းမှာ နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲနေသည့်ကာလတွင် တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုးအတွက်ကာကွယ်ပေးခြင်း။ မိမိတိုင်းပြည်အတွက် မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်ကာကွယ်ပေးခြင်းတို့အပြင် ရဲစွမ်းသတ္တိနှင့်ပြည့်စုံသော တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုးအတွက် အသက်နှင့် လဲ၍ကာကွယ်သည့် အရည် အချင်းပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်း။ စသည့်အချက်သုံးချက်နှင့် ကိုက်ညီသောကြောင့် ယခုကဲ့သို့ ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ပေးအပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း" ဖော်ပြပါရှိသည်။
အဆိုပါ ချင်းသူရဲကောင်းဘွဲ့ပေးအပ်ပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းထွန်းနောင်နှင့် တပ်မတော်အရာရှိများက တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး ချင်းပြည်နယ်တီးတိန်(ဇိုမီး)အဖွဲ့မှ ကက်သလစ် ခရစ်ယာန်ဘုန်းတော်ကြီး Rev.Fr. Joseph Thang Nen Zo Mung နှင့်အတူ ကက်သလစ် ခရစ်ယာန်ဘုန်းတော်ကြီး Rev. Fr. Thang Muan Lian၊ နှစ်ခြင်းသင်းအုပ်ဆရာများနှင့် တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
ယခု ကန့်ကွက်ခံရသည့် အဆိုပါ ချင်းသူရဲကောင်းဘွဲဲ့ (Gal Hang Pah Tawi Na Award) သည် မြောက်ပိုင်းချင်းတိုင်းရင်းသားများ၏ အမြင့်ဆုံး သူရဲကောင်းဘွဲ့ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်